OvRcharge ebubo mkpanaka gi ebe oburu na o levitates | Akụkọ akụrụngwa
Isi okwu adighi ada ụda, anyi n'ekwu ihe dika ha si eme, ya bu OvRcharge chaja nwere ike ịgba batrị ekwentị gị mgbe ị na-eme ya levitate. Anyị ga-ekwenye na ịba uru ma ọ bụ na ekwentị anaghị ezere mgbe ị na-akwụ ụgwọ, ọ bụghị ịkọwa ohere ọ ga-efe na nsọtụ ọzọ nke ụlọ ahụ. Mana ihe anyị enweghị obi abụọ ọ bụla banyere ya bụ ihe dị iche iche a rụpụtara na etu ọ ga-esi adị mma na tebụl akwa anyị. Anọla na obi abụọ, bata, anyị ga-agwa gị ihe gbasara OvRcharge.
A na-eji OvRcharge akụkụ nke elu nke ihe na-ewe uru nke ikuku na-akwụ ụgwọ iji mee ka ngwaọrụ ahụ dị elu mgbe ị na-ebunye ya, dị ka nke ahụ. Nke a quirky uploader ugbu a projecting na Kickstarter, ndị kasị ewu ewu crowdfunding n'elu ikpo okwu, na-achọ ego. O bu eziokwu na oru ngo a bu ihe puru iche na ihe ohuru, nke abughi ihe megidere ya, ebe obu na achoputaghi m ya. Mana anaghị m agọnahụ etu ọ ga-esi magburu onwe ya na ọpụrụiche ya n'abalị ahụ nke onye ọ bụla n'ime anyị, na-ebugharị ngwaọrụ ahụ.
K'anyị kwusi ụgbọ ala ahụ nwa oge, AR Designs, ndị nrụpụta ọrụ, ha ga-enye wireless wireless ikpe maka ndị kasị ewu ewu ụdị, ma a ga-enwe ụdị ole na ole na-agaghị adaba. Agbanyeghị, ha na-ekwuputa na ọ ga-adaba na nke ọ bụla ikuku ikuku na-akwụ ụgwọ. Banyere nsogbu dị ogologo nke ụdị usoro a, amabeghị ha ugbu a. Ọ ga-enwe ike ịkwado ngwaọrụ nke ruru gram 600, iji chekwaa, ntọala ahụ ga-atụle 140mm x 33mm x 140mm, na-enweghị akwụ ụgwọ ngwa ngwa. Ọnụahịa ahụ, nke kachasị sie ike, 209 CAD (dollar Canada) n'otu nkeji, agbanyeghị na Disemba ha nwere olile anya ịmalite ya n'ụwa niile ọnụahịa emegharịrị maka ọha na eze.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » OvRcharge ebubo mkpanaka gị mgbe ọ na-akwụ ụgwọ
Ọrụ Sony Xperia X bụ onye ndu na igwefoto igwefoto